USIPHESIHLE Mhlongo enza adume ngazo ekhishini Isithombe: SITHUNYELWE
Phili Mjoli | April 16, 2021
USEPHENDUKE intandokazi kontanga yakhe umfundi obafundisa ukupheka nokubhaka.
USiphesihle Mhlongo (14) waseNewlands West, ofunda uGrade 9 eCanaan College eMlaza, unamakilasi okufundisa ezingane ezineminyaka ewu-10 kuya phezulu ukupheka nokubhaka.
Uthi uyazifela ngokupheka kanti akasakhumbuli ukuthi waqala nini ukusiza unina ekhishini kodwa akukhumbulayo wukuthi wayesemncane, kangangoba unina wayenqaba ukuthi enze ezinye izinto ayefisa ukuzenza ngoba esaba ukuthi uzolimala.
"Izingane ezingangami eziningi azikwazi ukupheka. Yebo, ezinye vele azithandi ukupheka kodwa ezinye ziyathanda ukuthi azinabo abantu abazifundisayo ngoba omama bahlale bematasatasa ngoba impilo esiyiphilayo njengamanje iyashesha," kusho uSiphesihle.
Unina wakhe uNkk Nomusa Mhlongo, uthi indodakazi yakhe yaqala ukumsiza ekhisini ineminyaka emihlanu.
"Esaqala, ngangisaba ngicabanga ukuthi uzolimala. Wayethanda ukungiqobela u-anyanisi notamatisi, ngagcina ngivuma ngoba ngibona ukuthi uyathanda ukuba sekhishini," kusho unina kaSiphesihle.
UNkk Mhlongo uthe indodakazi yakhe ithe ngesikhathi isikwazi ukupheka yathi ifuna ukuzama amanye amaresiphi ebiwafunda emabhukwini noma kwiTV.
"Uma ngihamba naye siyothenga esuphamakethe uba nohla lwakhe lwezinto afuna zithengwe ukuze asiphekele,“ kuchaza unina.
Ngenxa yothando lokupheka, uSiphesihle useke waya amakilasini okupheka athelwa ngumpheki uZanele Zyl, nakaNonjabulo Nzuza.
"Okwamanje ngenza amakilasi ngesidlo sasekuseni ngoba isidlo sasekuseni sibalulekile. Ngokubona kwami wonke umuntu kumele akwazi ukwenza isidlo sasekuseni. Awudingi ukuthi ube nezinto ezibizayo ungasebenzisa izinto ezikhona ekhaya," kusho umpheki omncane.
Uqhube wachaza ukuthi abazali bakhe bayamsiza kodwa babuye bakhathazeke uma esezinikele kakhulu kulo msebenzi wakhe ngoba bebona ukuthi uzofeyila.
"Ngiyazithanda izinhlelo zokupheka nokubhaka, uma ngipheka ngifuna ukupheka ukudla othi uma ukubuka ukuhhalele. Okwamanje ekilasini lami ngiba nabantu abawu-10 abafundayo ngenxa yokuthi indawo engiyisebenzisayo incane. Okwamanje bekusengabanye abafundi abangangami engibafundisayo, ngisacabanga ukuthi ngingakwazi yini ukufundisa nezinye izingane ezincane ngoba ngiyazithola izingcingo kubazali bebuza ukuthi awekho yini amakilasi abaneminyaka engaphansi kuka-10," kusho uSiphesihle.